OEM Ọrụ - Hebei Fine Art Co., Ltd.
Igwe Igwe Anya Na-edozi Anya
Anya nku anya Silk
Uzo esi enweta na Syntetik nku anya
N’ahịrị na-arapara anya nku anya ugha
Ntughari nku anya ugha na otu ntutu
Ikwesiri ihe kacha mma
Njirimara nkeonwe (ọrụ OEM) bụ otu n'ime ewu ewu na-agbasa ebe a taa! Ma, onye ga-akacha kọwaa maka ya? Gị! Mgbe ị bụ ọrụ kacha mma nke Chukwu, kedụ ihe kpatara ị ga-eji resị gị onye ọzọ? Ikwesiri oru puru iche na Vannova bu nkwanye kacha mma maka imepụta ntutu anya nke onwe gi.
nku anya Private labelụ (OEM ọrụ)
Ọ bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha na nkwupụta nku anya nke onwe ya dị oké mkpa maka akara, yabụ ọ bụrụ na ị kwado anyị, anyị na-enyere gị aka ịmepụta nkwakọ ngwaahịa na-enweghị atụ. Pụrụ iche imewe otu ekwe nkwa a siri nkwakọ gị, na anyị imewe ọrụ bụ n'efu n'ihi na gị nnukwu iji. Nkwakọ ngwaahịa anyị nwere nnukwu mma n'ihi na atụmatụ ndị a niile na-eji ụfụ nke oge a eme ihe yana anyị nwere mmekọrịta chiri anya na nkwekọ na ọtụtụ ụlọ nkwakọ ngwaahịa na ụlọ ọrụ obibi akwụkwọ nke kpụrụ klas mbụ nke ụlọ ugbu a, mba ụwa na-eduga nhazi ngwaike na ikike mmepụta nke ihe nkwakọ ngwaahịa ọtụtụ afọ.
Mpempe akwụkwọ mkpịsị aka nke onwe na aha ntutu anya anyị na-achịkwa ọtụtụ ụdị nke ntutu ntutu ntutu anya nke onwe na ụdị ihe mkpuchi ntutu na ị nwere ike ịhọrọ ihe ọ bụla masịrị gị, Ọ bụrụ na enweghị ụdị ihu ọma gị, ị nwere ike ịgwa ụfọdụ ozi akọwapụtara iji kọwaa ihe masịrị gị, na ndị na-ese ihe nkiri anyị ga-aga n'ụzọ iji mepụta mmemme omenala nke na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ gị. Anyị na-ekwe nkwa ịdị mma ma na-enye ọmarịcha ọrụ ahịa azụmaahịa niile anyị rere. Anyị enyerela ọtụtụ ndị ahịa aka ịkwado ụdị ihe ịga nke ọma ha ma anyị ga-arara ọrụ gị site na mbọ anyị niile. Biko egbula ịkpọtụrụ anyị, ndị otu anyị dị njikere iso gị rụọ ọrụ.
Usoro nke aha njirimara
(1) Nke mbụ, ịkwesịrị ikwenye usoro izizi;
(2) Mgbe ahụ gwa anyị ụdị nkwakọ ngwaahịa ịchọrọ na echiche nke imewe ịchọrọ, anyị ga-edozi ihe ị chọrọ n'aka ndị na-ese ihe nkiri anyị ma dozie imewe;
(3) Anyị ga-enwe ma ọ dịkarịa ala atụmatụ 3 maka atụmatụ gị. Họrọ nke kachasị mma ịchọrọ ma gwa anyị ma ịchọrọ mgbanwe ọ bụla;
(4) Anyị ga-eziga adi na imewe iji gosi na gị;
(5) Ọ bụrụ na afọ juru gị, anyị ga-eme faịlụ obibi maka ụlọ ọrụ na-ebi akwụkwọ mgbe ị nyochachara okpukpu atọ. Printinglọ ọrụ na-ebi akwụkwọ ga-akwado ma hazie nnukwu mmepụta;
(6) Anyị ga-enweta igbe ikpeazụ adịghị mma ma tinye ya na lashes gị, wee zigara gị ya.
70lọ 703, Zhongyuan Building, 368 North Youyi Street, Shijiazhuang, Hebei, China.